तानसेनमा एमालेको अग्रता, पत्रकारलाई सहज प्रवेश छैन – Sero Fero News
Home/Trending News/तानसेनमा एमालेको अग्रता, पत्रकारलाई सहज प्रवेश छैन
तानसेनमा एमालेको अग्रता, पत्रकारलाई सहज प्रवेश छैन
Mukti Neupane June 29, 2017	Trending News, मुख्य समाचार Leaveacomment4Views
पाल्पा, असार १५
जिल्ला सदरमुकाम रहेको पाल्पामा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । मेयरमा रुख चिन्हले २१५, एमाले ३३१, हसिया हथौंडा २४, मसाल २ र क्यामेराले ४ मत प्राप्त गरेको छ ।
उपमेयरमा रुख २५८, सूर्य २८३, हसिया हथौडा ३६, मसाल १, घर ३ र गाईले १ मत प्राप्त गरको हो । अहिलेसम्म तानसेनको वडा नं. १ मा रुख ८६, सूर्य १५८, हसिया हथौडा ३८ र घरले ४ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै वडा नं. २ मा रुख १५५, सूर्य ११९ र भुईकटहरमा २४ मत गणना भएको छ ।
बुधबार सम्पन्न भएको निर्वाचनमा ७२ दशमलव ७४ प्रतिशत मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरतमणी खनालले बताए । जिल्ला सदरमुकाम तानसेन नगरपालिकाको मतगणना स्थलमा पत्रकार प्रवेशमा नियन्त्रण गरिएको छ । जिल्लामा तीन जना पत्रकारहरुलाईमात्र प्रवेश अनुमति दिइएको हो । पत्रकार महासंघ पाल्पाका सभापति राजेशकुमार अर्यालले महासंघ पाल्पालाई समन्वय नगरि प्रवेशमा नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए । उनले दलहरुको बैठकमा सहमति नभएकोले थोरै पत्रकारलाई प्रवेश अनुमति दिएको बताए ।
मतगणना स्थल पाल्पा दरबार परिसरमा पत्रकारहरुलाई तीन वटा पास व्यवस्था गरिएको छ । केही निश्चित व्यक्तिहरुलेमात्र पासको उपयोग गर्दा धेरै पत्रकार बाहिर कुरुवा झै बसिरहेका छन् । दरबार परिसर भित्र क्यामेरा, मोबाईल, रेकर्डर समेत लैजान दिईएको छैन ।
Previous पाल्पामा काङ्ग्रेसको विजय सुरुवात
Next निस्दी गाउँपालिकाको प्रारम्भिक मतपरिणाम आउन सुरु